वितरण प्रणाली ध्वस्त पार्दै आयल निगम | Jukson
वितरण प्रणाली ध्वस्त पार्दै आयल निगम
काठमाडौं – तराई–मधेस आन्दोलन तथा भारतको नाकाबन्दीले काठमाडौंमा दुई महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार छ । काठमाडौंका सडकमा सवारीसाधनको चाप भाने उल्लेख्य रुपमा घटेको छैन । पछिल्लो समय त बढ्दै गएको देखिन्छ । तपाईंलाई पेट्रोल चाहिन्छ भने लिटरको ४ सय रुपैयाँ तिर्नुस्, तपाईंलाई राति घरमै डेलिभरी गर्न तयार छन् बिक्रेता ।
खाना पकाउने ग्यास चाहियो भने पनि ८ हजार रुपैयाँ तिर्नुस्, घरमै भरी सिलिन्डर आइपुग्छ । सामान्यतः पेट्रोलपम्पमा पाइने पेट्रोल तथा डिजेल र डिपोबाट पाइने खाना पकाउने एलपी ग्यास अचेल घरघर तथा पसलपसल डेलिभरी सुविधासहित बिक्री वितरण गरिन्छ । पम्पबाहेक अन्यत्र कारोबार गर्न नपाइने अत्यन्त संवेदनशील पेट्रोलियम पदार्थको खुलेआम कालोबजारी किन भइरहेको छ ?
जवाफ सहज छ – तेल कारोबारको एकलौटी अधिकार पाएको नेपाल आयल निगम आफ्नो वितरण प्रणाली पारदर्शी एवं न्यायोचित बनाउन चाहँदैन । निगमले वितरण प्रणाली नै कालोबजारीका लागि अनुकुल बनाइदिएको छ, जसका कारण संकटका केला आपूर्ति भएको तेल तथा खाना पकाउने ग्यास बजारमा निश्चित पम्प तथा डिपोबाट हराएका छन्, आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
साढे चार सय शक्ति सिलिण्डर डिपोबाटै गायब, उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष कोईरालाले कुरा फेरे !
हरिशयनी एकादशी, घर—घरमा तुलसी रोपिदैँ
अकिरा : बोल्ड एक्सन अवतारमा सोनाक्षी (ट्रेलर)
अमेरिकाका सर्वसाधरण असुरक्षीत , फेरि अर्को गोली काण्डमा पाँचको ज्यान गयो